The Effect of Using Telfon Air-Fryer
Covid Second Wave အတွင်း ထိုင်စား စားသောက်ဆိုင်တွေ မဖွင့်တာနဲ့ အိမ်ရှင်မတွေကတော့ Air Fryer နဲ့အိမ်မှာ မုန့်တွေလုပ်စား ဟင်းတွေ ချက်စားကြပါတော့တယ်။ဆီမလိုပဲ အာလူးကြော်တို့ ကြက်ကြော်တို့အပြင် ပေါင်မုန့်ပါဖုတ်ကြ Burnt cheese cake ထိပါလုပ်ကြတာတွေကို ဒီကနေဘာတွေသုံးသပ်ထားလဲဆိုတာ တူတူလေ့လာရအောင်။
ကြက်ကြော်လို ကြွပ်ကြွပ်ရွရွနဲ့ အချိန်တို အတွင်း ဆီမလို ဝိတ်မတက်ဘဲ လုပ်စားလို့ရပြီး ကျန်းမာရေးအတွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့ Air-Fryer တွေကတော့ ဝယ်လိုအားမြင့်ပြီး လူကြိုက်များလာကြပါတယ်။
တချို့ကတော့ ဒီလို ပုံစံအသစ်နဲ့ ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ခြင်းကြောင့် အစားစာ အဆိပ်တောက် ဖြစ်မှာစိုးတာရယ် ကင်ဆာ လိုမျိုး ကျန်းမာရေး အန္တရာယ်အတွက် စိုးရိမ်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် အစားစာတွေကို ဆီထဲထည့်ကြော်ခြင်းသာ acrylamide လိုမျိုး အန္တရာယ်ရှိဒြပ်ပေါင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေတာပါဘဲ။ စစ်တမ်းတွေအရကြည့်မယ်ဆိုလည်း သားအိမ်၊ရင်သားကင်ဆာနှင့် အစာပြွန် ကင်ဆာ တို့ဖြစ်တာတွေလည်းမြင်တွေ့ရတာအမှန်ပါဘဲ။
ဒါဆို air-fryer တွေကရော? ဓာတ်ရောင်ခြည် နည်းခြင်း (radiation) ကို အသုံးပြုတာလား?
- မသုံးပါဘူး။ ဆီအနည်းငယ်ဖြင့်သာ စားစရာကို လေပူမှုတ်ပြီး မီးအပူပတ်လည်ပေးပြီဒ ချက်ပြုတ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပစ္စည်းတိုင်းကတော့ အကောင်းအဆိုးဒွန်တွဲနေတတ်တာပါဘဲ။ ကောင်းတာလေးတွေ အရင်ပြောရမယ်ဆိုရင် air fryer တွေက ဆီမသုံးသောကြောင့် အနံ့သက် ဆိုး ရတာ၊ အမဲဆီတွေပေကျံနေတာမျိူးမရှိနိုင်သလို ဆေးကြောသန့်စင်ရတာလည်း လွယ်ကူပါတယ်။ Timer ပါဝင်တာကြောင့် တခြားလုပ်စရာလုပ်နေလို့ရတာမို့ အလုပ်များတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Eco-friendly ရောဖြစ်လား?
- Air-fryer တွေက ဗို့လ်ဆွဲအားသိပ်မများသလို လျှပ်စစ် မီးဖိုတွေထက် အချိန်ပိုမြန်ကာ လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှုနည်းတာကြောင့် ငွေချွေတာရာရောက်သလို ကာဗွန်ထုတ်လုပ်မှုကိုလည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။ သို့သော် Teflon (Polytetrafluoroethylene) လို့ခေါ်တဲ့ ချောဆီတမျိုးကို air-fryer ရဲ့မျက်နှာပြင်မှာမကပ်အောင် သုတ်လိမ်းထားခြင်းဟာ အစားစာများနှင့် ရောနှောနေသည့်အတွက် အပူချိန်မြင့်လာလေ ပိုအန္တရာယ်ရှိလေ ပါဘဲ။
ဒါကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမဖြစ်စေဘဲ.... အရည်သွေးကောင်းမွန်တဲ့ air-fryer များကိုလည်း ရွေးချယ်အသုံးပြုတတ်ဖို့လိုသလို မိမိအိမ်မှာသုံးနေတဲ့ အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေစွမ်းအင်ဘယ်လောက် သုံးစွဲနေသည်ကိုလည်း တွက်ချက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်။
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx အပေါ်မှာပြထားတဲ့ link ကနေတဆင့် Carbon Footprint - Emission ဘယ်လောက် ရလဲဆိုတာ တွက်ပြီး comment မှာပြန်ပြောပြပေးသွားပါဦး နော်။
As soon as the restaurants were closed during the Covid Second Wave, people started developing their cooking with the Air Fryer at home and showing their skills. Without cooking oil, the air-flyers make fried potatoes and chicken, as well as bread and even burnt cheesecake.
Air-Fryer is gaining popularity as promotions such as fried chicken, which can be cooked as lean and fat-free inashort period of time with those air-fryers and are not harmful to health, are buzzing around and hot on Facebook.
Some fear the fact that this new form of frying could lead to food poisoning and other health risks, such as cancer. In fact, it is only when frying foods that they contain harmful compounds, such as acrylamide. Some studies show that it can cause cancer of the uterus, breast, and esophagus.
So, how about air-fryers? Do they use radiation for cooking?
-Not used. You can only cook food withalittle oil by blowing hot air and circulating radiated heat around the food. But, every product has pros and cons. Since there's no oil being used there's no smelly, hot grease, and an obnoxious mess to clean up afterward. It hasatimer so you can do other things, and which is convenient for busy people.
Is an air-fryer eco-friendly to use?
-Air-fryers use less voltage, run faster, and use less electricity than electric stoves, which saves money and reduces carbon emissions. However, applyingalubricant called Teflon (Polytetrafluoroethylene) to the surface of the air-fryer to prevent it from sticking to the food becomes more dangerous as the temperature rises.
Therefore, you need to choose good quality air-fryers without polluting the environment and also need to calculate how much energy your kitchen appliances use.
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx Calculate the carbon footprint via the above link and kindly share the results in the comment box.
RecyGlo Co., Ltd. Waste Management & Recycling Technologies 09-404245800 contact@recyglo.com, communication@recyglo.com www.recyglo.com